Golaha wasiirada soomaaliya oo kulan deg deg ah maanta yeeshay. HOME
Golaha wasiirada soomaaliya oo kulan deg deg ah maanta yeeshay. Posted by By admin at 11 June, at 14 : 33 PM Print Shir ay maanta yeesheen Golaha Wasiirada oo uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Warbixin safarkii Ra’iisul Wasaaraha, warbixin arrimaha amniga, Dhameystirka Qorshaha Roadmap-ka iyo Siyaasadda Dowladda ee maamul u sameynta goobaha laga xorreeyey kooxaha Al-Shabaab.
Ugu horeyntii Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka warbixiyey safari uu ku tagey Ethiopia, Djibouti, Kenya iyo Turkiga. Waxuu sheegay in shirkii Addis Ababa ee saxiixayaasha uu ku soo dhamaaday guul oo ay ka soo baxeen heshiiskii Addis Ababa oo leh jadwal lagu soo afjarayo xilliga KMG ah iyo in dastuurka lagu daray tallooyinkii saxiixayaasha ay soo jeediyeen.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaruhu waxuu sheegay inuu booqasho rasmi ah oo uu ku tegey Djibouti si fiican loogu soo dhoweeyey isla markaana uu Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha Djibouti kala hadlay qorshaha dhameystirka Roadmap-ka oo uu sheegay in Dowladda Dalka jibiouti ay muhiim u tahay nabad ku soo dabaalidda Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaarahu waxuu kaloo sheegay in uu Nairobi kula kulmay Ra’iisul Wasaaraha Kenya oo ay ka wada hadleen howlgaladda ka socda gobollada jubbooyinka iyo soo afjaridda xilliga KMG ah, waxuuna sheegay in Kenya ay muujisay sida ay uga go’antahay inay kaalin fiican ka qaadato soo celinta amniga iyo kala danbeynta dalka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka warbixiyey safarkii Turkiga iyo shirkii Istanbuul 2 oo uu sheegay in 30kii May uu kulan gaar ah la yeeshay Ra’iisul Wasaaraha Turkiga oo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen shirka Istanbuul 2, howlaha baaxadda leh ee Turkigu ka wadaan Soomaaliya iyo maalgashiga mashaariic lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka.
Ra’iisul Wasaarahu waxuu sheegay in shirkii Istanbuul uu aad iyo aad muhiim ugu ahaa Soomaaliya oo la isku raacay in la furo sanduuq dhaqaale oo loo sameeyo Soomaaliya oo dhanka dib’u dhiska dalka ah.
Waallida Gawaadhi Wadista Khaliijka Oo Wax Aan Hore Loo Arag Soo Bandhigay ~ News, Puntland News 18 June, at 13 : 33 PM